CMK Construction Group
Chan Myae Kywe Construction Group Untitled Document
Chan Myae Kywe Construction Group Co., Ltd.
ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှုဖြင့် အရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းရန်(To keep quality, efficiency and honour by upmost good faith )
A.G Construction Co., Ltd.
With our team's overseas experience, completed projects and mangement knowledge, We would like to join and work together with your company firm.
Tun Linn Group Construction Co., Ltd.
QM / CONQUAS / green Projects(experience)
Glamorous Myanmar Travel & Tour Co., Ltd.
In Culture, we trust...
In Heritages, we value...
In Service, we Fulfill…
Nilar Lin Lat Co., Ltd.
THE ORANGE GROVE CONDOMINIUM @ STEVENS ROAD THE ORANGE GROVE CONDOMINIUM @ STEVENS ROAD TRESALVEO CONDOMINIUM@ MARYMOUNT TERRACE Chan Myae Kywe Construction Group Company Limited
Chan Myae Kywe Construction Group Company Limited
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၃၃၈၀/၂၀၁၂-၂၀၁၃) ကုမ္ပဏီဆောင်ပုဒ် (Our Motto)
" ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှုဖြင့် အရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းရန် "
(To Keep quality, efficiency and honour by upmost good faith)
ကုမ္ပဏီခံယူချက် (Our Mission)
" လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများဧ။် လိုအပ်ချက်အပေါ် မြင့်မားသောအရည်အသွေး၊ စနစ်ကျနသော ကြီးကြပ်မှု နှင့် သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးရန် "
(To serve our clients with high quality, systematic control, efficient services and integrity inafast manner.)
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီနည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်သော အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လက်ရာကောင်း၊ လက်ရာမွန်အဆောက်အအုံနှင့် လမ်းတံတားများအား ခန့်ညားသပ်ရပ်စွာဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘ၀ပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်စေဘဲ၊ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ဖန်တီးတည်ဆောက်သွားရန်။
ချမ်းမြေ့ကြွယ် ဆောက်လုပ်ရေးအုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ကုမ္ပဏီ(၈)ခု ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ဦး ကျော်နိုင်ဦး မှ Group of Company ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုကာ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Valued Customer များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှုများ မိမိတို့မှ ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးတောင့်တင်းမှု၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပြည့်ဝမှု၊ စနစ်ကျသော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိထားသော အောက်ဖော်ပြပါ Business Partner ကုမ္ပဏီများဖြင့် စုပေါင်းအားကို ရယူဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Read More Projects
ကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်ပြီးနှင့် တည်ဆောက်ဆဲ အဆောက်အအုံများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ Address: No.388-398, Mingalar Ahsintmyint Housing, A(1-4) 3rd Floor, Sinmin Quarter, Kannar Road, Ahlone Township, Yangon.
Phone: 01 2301503
Fax: 01 2301503
Business Partner ကုမ္ပဏီများ
A G Construction Co., Ltd.
Family Engineering Group Co., Ltd.
Tun Lin Group Construction Co., Ltd. Maxi Millions Development Construction Co., Ltd.
Maxi Million Trading Co., Ltd.
ချမ်းမြေ့ကြွယ် ဆောက်လုပ်ရေးအုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းပုံ
Engineering Department ဖွဲ့စည်းပုံ
Planning, Admin & Finance Department များဖွဲ့စည်းပုံ
View All ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း
No.388-398, Mingalar Ahsintmyint Housing, A(1-4) 3rd Floor, Sinmin Quarter, Kannar Road, Ahlone Township.
Call Us Now: 01-2301503 Join Us Now: cmkconstructiongroup24@gmail.com
Copyright © Chan Myae Kywe Construction Group Company Limited. All Rights Reserved.